फ्लोरेन्स आँधी : अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा सबैलाई सजग रहन चेतावनी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फ्लोरेन्स आँधी : अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा सबैलाई सजग रहन चेतावनी
बीबीसी । फ्लोरेन्स नामक शक्तिशाली समुद्री आँधी अमेरिकाको पूर्वी तटस्थित नर्थ क्यारोलाइना राज्यनजिक पुग्न लागेको बताइएको छ।
मौसमविद्हरूले ठूलो वर्षा र हुरी आउने र त्यसले ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हुरीको गति केही कम भइरहेको छ। तर हुरी लामो समय चलिरहन सक्ने हुनाले क्षतिको परिमाण धेरै हुनसक्ने बताइएको छ।
सत्र लाखजति मानिसहरूलाई आफ्नो घर छाडेर सुरक्षित स्थलमा जान भनिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले फ्लोरेन्स आँधीको शक्तिलाई ुक्याटगरी टुु मा घटुवा गरेका छन्।
तर पनि अझै ठूलो खतरा रहेको भन्दै उनीहरूले सचेत गराएका छन्। हावाको वेग १७५ किलोमिटर प्रतिघण्टामा झरेको छ। आँधीको प्रभाव क्षेत्रमा करिब एक करोड मानिसहरू रहेका छन्। फ्लोरेन्स आँधी अहिले अझ दक्षिणतर्फ गइरहेको छ।
आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने जोर्जिया पछिल्लो राज्य बनेको छ।यसअघि नर्थ र साउथ क्यारोलाइना, भर्जिनिया, मेरिल्यान्ड र वासिङ्टन डीसीले आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरिसकेका छन्।
आँधीका कारण केही समयसम्म ठूलो वर्षा हुने र त्यसले एलाबामा, टेनेसी, केन्टकी र वेस्ट भर्जिनिया जस्ता क्षेत्रहरूमा विनाशकारी बाढी आउन सक्नेछ।
नर्थ क्यारोलाइनाका गभर्नर रोए कुपरले भनेका छन्( तयारी गर्ने समय लगभग सकिएको छ। र। अब प्रकोप हाम्रो ढोकासामुन्ने आउँदैछ।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एउटा भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्( यो हाम्रो देशमा आएको सबैभन्दा ठूलोमध्ये एउटा आँधी हो। जीवनरक्षा नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो।